कोरियन चाड छुसकमा थेगुमा भव्य भलिवल प्रतियोगिता हुँदै ! – korea pati
September 17, 2020 Korea patiLeaveaComment on कोरियन चाड छुसकमा थेगुमा भव्य भलिवल प्रतियोगिता हुँदै !
नेपाली परोपकार समाज खुजी थेगु दक्षिण कोरियाले कोरियन महान चाड छुसकको अबसरमा मैत्रीपुर्ण नकआउट भलिबल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ।
अक्टोबर २ तारिकका दिन प्रतियोगता आयोजना हुने समाजका उपाध्यक्ष फडिन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए।
कोरोनाको कारणले कुनै पनि कार्यक्रमहरु गर्न नसकी रहेको अवस्थामा अहिले केही सहज अवस्था देखिएको र छुसकको अवसरमा सबैको छुट्टी मिल्ने भयेकोले भलिबल प्रतियोगिता गर्न लागिएको भट्टराईले बताए।
प्रतियोगिता थेगु आसपास भएका सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरु (केही नाम चलेका खेलाडी बाहेक) सबैलाइ समेटेर खेलाइने कुरा पनि नेपालि परोपकार समाजले निणय गरेको छ ।
स्थानिय प्रशासन तथा स्थानिय नगरपलिका दुबैको अनुमति लिएर सुरक्षित तरिकाले खेल खेलाउन लागेको बताइएको छ।
खेल थेगु नजिकै कुजीको भलिबल खेल मैदानमा हुने छ । खेल टि टि प्रणालीमा हुने खेलमा प्रथम हुनेलाइ 10 लाख वन, दितिय हुनेलाइ7लाख वन र तृतिय हुनेलाइ3लाख वन पुरस्कार सहित कप,र मेडल प्रदान गरिने जनाईेएको छ ।
टिम दर्ताको लागि 250,000 कोरियन वन लाग्ने र उक्त रकम केइबि हाना बेंकको खाता न.१४४९१०४६७८०१०७( अर्याल महेन्द्र )मा जम्मा गर्न सकिने छ ।
थेगु आसपासमा रहेका सेल्टर,संघ संस्थाहरु एबम् नजिकै रहेका हाम्रा संघ संस्था तथा बुद्दिजिवी र खेल प्रेमिहरुलाई प्रतियोगिता सफल पार्नको लागि सहयोग गरिदिनु हुन पनि आयोजक सँस्थाको तर्फ बाट अनुरोध गरिएको छ ।
बिस्तृत जानकारिको लागि खेल सम्योजक तथा वरिष्ठ सल्लाहकार फत्त पुन 010 23969998 अध्यक्ष निमेष गुरुङ 01048822044 उपाध्यक्ष फडिन्द्र भट्टराई 01058326345 सचीव अमृत अधिकारी मित्र मगर 01058323708 बिनय सिन्जाली0108295996